Tips and Tricks Archives - Page3of5- Myanmar End User
ZawGyi Version Web developer ဆိုတာ ? Web developer ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ အရင် သိဖို့လိုတယ်။ web developer ဆိုတာက website တစ်ခုလုံးကို developing လုပ်နိုင်တဲ့လူပေါ့။ တနည်းပြောရင် ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို ...
Zawgyi Version HDD ဘာဆိုတာ သိပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်။ HDD ဆိုတာ Hard Disk Drive ကို ပြောတာပါ။ Hard Disk ဘာကြောင့် ပျက်တတ်သလဲ။ သိထားသင့်တဲ့ အချက်ပါ။ Hard Disk ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ...
Screenshot ဆိုတာ Smartphone ရဲ့ Screen ကို ဓါတ်ပုံရယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Screenshot ကို ဘာကြောင့် ရယူသလဲဆိုရင်တော့ အကြောင်းရင်းက မိမိရဲ့ ဖုန်း Screen ကို မျှဝေ သိမ်းထားချင်လို့ပါ။ ဥပမာ – Facebook က ...
Mobile Data အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ Mobile data သုံးစွဲမှုမှာ အော်ပရေတာတွေနဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အချို့ ပြဿနာတွေက အော်ပရေတာတွေရဲ့ System error တွေကြောင့် ဖြစ်သလို အချို့ ပြဿနာတွေကတော့ Mobile data သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ပေါ့လျော့ နားမလည်မှုတို့ကြောင့် ...
( နယ်တွေ မှာ ဆိုလာပြား နှင့် ဘက်တရီကြောင့် မီးလောင်၊ လူသေမူများရှိလာ၍ ဗဟုသုတ အဖြစ်တင်ပြပါသည်။ ) (၁) ဆိုလာအလင်းလျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ နေရောင်ခြည်အလင်းစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နည်းပညာ ဖြစ်ပါ သည်။ နေအလင်းရောင်တွင်ပါဝင်သော အလင်းမှုန်များမှ ဆိုလာပြား အတွင်းရှိ ...
By Myanmar End User February 22, 2017 3